DEG DEG: Paulo Dybala oo aan maanta imaanaynin horyaalka Premier League & Heshiiskii uu ugu biiri lahaa Kooxda Tottenham oo burburay – Gool FM
DEG DEG: Paulo Dybala oo aan maanta imaanaynin horyaalka Premier League & Heshiiskii uu ugu biiri lahaa Kooxda Tottenham oo burburay
(London) 08 Agoosto 2019. Sida wararka ay sheegayaan Paulo Dybala ayaan maanta imaan doonin horyaalka Premier League, iyadoo uu burburay heshiiskii uu ugu biiri lahaa kooxda Tottenham.
Sida ay shaacisay BBC Sport heshiiskii la filayay in kooxda kubadda cagta Tottenham kula wareegto weeraryahanka naadiga Juventus ee Paulo Dybala ayaa burburay.
Waxa ay Spurs ayaa doonaysay inay la soo wareegto xiddigan xulka qaranka Argentine, waxaana ay rabeen inay heshiiska shaqsiga ah la gaaraan 25-sano jirkaan, iyagoo xitaa ogolaa inay bixiyaan lacagaha dagaalka ee uu doonayey Wakiilkiisa Jorge Antun.
Yeelkeede, Suxufiga ka howl-gala BBC ee David Ornstein ayaa warinaya in kooxda Juventus ay go’aansatay inaysan iska iibinin xiddigan weerarka ka dheela ee Paul Dybala, taasoo meesha ka saartay u dhaqaaqitaankiisii horyaalka Premier League oo maanta xirmaya, isla markaana burburisay rajadii ay Tottenham ka lahayd saxiixiisa.
Labo maalmood ka hor ayay ahayd markii kooxda Tottenham ay dalab 70 milyan oo euro ah ka gudbisay Dybala, dalabkaasoo ay aqbashay Juventus, balse shuruudda ku xirnayd ayaa ahayd in ciyaaryahanka ay la gaaraan heshiiska shaqsiga ah.
Kooxda Tottenham intii aysan heshiiska shaqsiga ah la gaarin Dybala, naadiga Juve ayaa ka baxday heshiiskaas oo burburisay, waxaana la fahamsan yahay in weeraryahanka reer Argentina uu xilli ciyaareedkan sii joogi doono garoonka Allainz.
“Waxba kuma guuleysan laheyn haddii aan ku biiri lahaa Manchester United”